China 5XZC-7.5DS Seed Cleaner & Grader mpanamboatra sy mpamatsy | SYNMEC
5XZC-7.5DS mpanadio voa sy mpanakitra
Ny mpanadio sy ny mpanadio voa dia lasa milina fanadiovana fototra sy ankafizina indrindra amin'ny indostrian'ny masomboly sy voamaina amin'ny tsena eran-tany, miaraka amin'ny fahombiazana ambony, fampisehoana tsara, fampiharana malalaka
Ny mpanadio sy ny mpanadio voa dia ampiasaina amin'ny fanadiovana sy fanasokajiana masomboly, voamaina, voamaina ary vokatra granule hafa.
Izy io dia azo ampiasaina hifanaraka amin'ny asa sy tanjona manokana isan-karazany.
Ny 5XZC-7.5DS mpanadio rivotra avo roa heny dia natao indrindra hanesorana ny fahalotoana maivana 100% toy ny akorandriaka, vovoka, ravina ravina mololo avy amin'ny vovoka GRAIN, zavatra vahiny lehibe sy kely. voa .Tsy vitan'ny hoe mety ho an'ny orinasa fanodinana masomboly, mety ho an'ny mpamboly tsy miankina ihany koa ny manodina sy manadio VARINY .Masinina fanadiovana masomboly teff.
Ny vovoka sy ny loto maivana rehetra dia azo esorina amin'ny mpankafy aspirator. Ny voa voa dia mianjera amin'ny sosona sivana ary nosarahan'ny sivana araka ny fahasamihafan'ny sakany sy ny hateviny. Ny loto lehibe sy samll rehetra dia navoaka tamin'ny fivoahana samihafa.
Sketch fitsipika miasa:
Ny fandehan'ny asa
Ny voam-bary dia latsaka ao anaty boaty fampidirana voamaina aorian'ny fanasivanana rivotra, ary eo ambanin'ny fihovitrovitra ny voa mitsambikina sy mikoriana mankany amin'ny vatan-kazo sieving multi-sosona, manaraka ny voam-bary mifandanja tsara dia miditra amin'ny sivana ambony amin'ny alàlan'ny lamba fingotra. Ny voa voafantina dia hianjera ao amin'ny tontonana sieving ambany manaraka aorian'ny fanasivanana, ny akofa sy ny potipoti-javatra voasakana amin'ny sivana ary hafindra any amin'ny fivoahana misy loto lehibe. Ny voa voafantina dia hianjera ao amin'ny sosona ambany sieving tontonana, ary ho naoty amin'ny ambaratonga samihafa amin'ny isan-karazany ny sieving habe amin'ny alalan'ny sievings isan-karazany sieving sosona, izay vokatry ny sosona sieving tontonana dia samy hafa ny haben'ny mash. Ny voa voafantina dia mikoriana mankany amin'ny fivoahan'ny voa tsara, fenoy ao anaty kitapo mihantona eo amin'ny fitoeran-kitapo. Ny satrobon'ny fivoahana dia azo ampiasaina amin'ny fandefasana kitapo izay midika fa afaka manakaiky ny satroka rehefa manova ny kitapo ianao. Izany dia ny fizotran'ny asa manontolo ho an'ny separator.
Mampiasà sivana samihafa amin'ny dingana samihafa amin'ny karazana voa. Ny varavarankely fanaraha-maso eo amin'ny vatan-kazo sieving dia natao hanamarinana ny asa.
fampisehoana zoro maro
Efitrano Fanampiana (Sieve Rivotra)
Esory ny vovoka, ny mololo, ny hey, ny hodi-kazo ary ny loto hafa maivana amin'ny voa.
Tandremo sy kibo manitsy ny elanelan'ny fantsona (lehibe amin'ny ambony ary tery amin'ny farany) mba hahazoana vokatra tsara indrindra mampisaraka. Esory ny loto maivana rehetra raha milatsaka ny voa tsara.
Separator cyclone vovoka dia fomba matihanina amin'ny fanesorana poti-tsolika amin'ny rivotra, entona na ranon-javatra, tsy mampiasa sivana.
Ny fiantraikan'ny fihodinana sy ny hery misintona dia ampiasaina hanasarahana ny fifangaroan'ny solida sy ny fluid.
Ny hidin-drivotra dia mamoaka ny loto avy amin'ny rivo-doza separator ary mitazona ny faneren'ny rivotra ao amin'ny rafitra aspiration
Mikoriana manasaraka voa
Ny voa dia alaina amin'ny alàlan'ny ascenseur siny ary latsaka ao anaty boaty fanaparitahana voa, izay miparitaka tsara ny fikorianan'ny voa, raha toa ka miangona amin'ny lafiny iray ny voa. Aorian'izay dia latsaka ao anaty vata sivana ny voam-bary ary esorina miaraka amin'ny aspiration ny fahalotoana maivana.
Voankazo miparitaka ao anaty vatan-kazo sivana mba hanasarahana. Amin'ity ampahany ity, ny voa / voa dia nosokajiana tamin'ny takelaka galvanize misy lavaka samihafa isaky ny sosona. Ny habe lehibe sy ny habe kely dia nariana tamin'ny fivoahana samihafa. Ny voa nodiovina farany dia mivoaka avy amin'ny fivoahana lehibe.
Rafitra fanadiovana rivotra roa
Double sodina suction rivotra, mampitombo ny fanadiovana mahomby,
Mitsentsitra maivana kokoa loto sy vovoka, dia hahatonga ny voa
Tantana endrika kintana
Namboarina ny sivana, ny sivana afaka
Tena mety ny misintona ireo sivana. Afaka manova mora foana ny sivana ny mpanjifa rehefa manadio voa na voa hafa.
Ny sivana ao anatiny dia vita amin'ny vy vita amin'ny tafo maharitra. Izahay dia hampitaovana lavaka sieves mety araka ny akora fototra an'ny mpanjifa.
Mba hisafidianana sieves tonga lafatra, ny santionan'ny voa (misy loto) na sary fandrefesana voa dia ilaina aorian'ny fametrahana ny mpanjifa. Mariho fa ny sivana iray napetraka dia natao ho famatsiana manara-penitra, ampiasaina ho an'ny karazana voa iray ihany.
Fanamarihana: Misy sivana stainless vy.
Ampiasaina hamindrana fitaovana (voamaina). Misy amin'ny dikan-teny raikitra sy azo mihetsika mba hampifanaraka ny tontolo iasana samihafa.
Izy io dia manana rafitra mirindra, interface tsara ho an'ny mpampiasa, mora karakaraina, mitsitsy angovo, mora diovina, misoroka tsara ny fifangaroana.
Kabinetra fanaraha-maso herinaratra
Manana ny endri-javatra ny mora miasa, mila fotsiny
mampifandray ny hery. Ny tariby dia 100% varahina,
dia miantoka ny kalitao avo lenta sy ny fampiasana maharitra.
Nametraka ny rafitra sy ny kodiarana mitondra entana izahay, mba hahafahanao miasa any an-tanàna.
refy (L × W × H) 3920*2430*3440mm
Dimension ny sivana 1250*2400mm
Capacity (isaina amin'ny varimbazaha) 7,5t/h
Air Lock 7,5kw
Hery tanteraka 9.9kw
teo aloha: 5XZC-15 Fanadiovana sy mpanakitra voa
Manaraka: 5XZC-5DH mpanadio voa sy mpanakitra
Mpanadio voa sy mpanafatra
5PJ-5 tsaramaso milina fanosotra / tsaramaso tsaramaso soja...
5BY-13P batch karazana voa coating milina
5XP-S Drum Type Pre-Cleaner voa mialoha fanadiovana m...